Myanmar IT Resource Forum » Garbage » စိတ်လေလို့
1 စိတ်လေလို့ on 25th December 2009, 11:22 pm
ကျနော် တခါမှ မောဒ်တွေ ဘာတွေ လုပ် ညာတွေ လုပ် ၀င်မပြောဘူးပါဘူး။ ကျနော်နဲ့ လည်းမဆိုင်ဘူး ကို
ခုက မောဒ်တိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး နော်။ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာ ကို ကိုယ်သိမှာပါ ။ ကျနော်နာမည်နဲ့ မပြောချင်လို့ ဘာမှ မပြောတော့ဘူး ။
ဖိုရမ်တွေ အပြိုင်အဆိုင် ဖြစ်လာတဲ့ အခါ သတိပြုကြပါ ။ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစ်စ က ကိုယ်ဖိုရမ်နဲ့ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုင်နိုင်လားဆိုတာကို
ကျနော် အဲ့နေ့ gtalk ပေါ်မှာထည်း ကသတိပေးတယ် ။ mmso ကလူတွေ ကိုဘာတခွန်မှ သွားမပြောနဲ့ တကယ်မလုပ်နိုင်ပဲ မကြွားနဲ့ ဆိုတာ ။
Mmitresource မျက်နှာကြည့်အုန်းဆိုတာလေ ။ စွမ်းထက် တို့ ကျနော်တို့ မျက်နှာတွေ့ကြည့်အုန်းဆိုပြီ
brb က ကလေး မဟုတ်ဘူး ။ mmso ကလူတွေ ကလည်းတယောက်မှ ငပိန်းတွေ မဟုတ်လောက်ဘူး ။
ဒီနေ့ ကျနော်တို့ မောဒ်တယောက် ပြသနာရှာ သွားတယ်ဆို တာ သိရတယ်
ကျနော် လည်း မျက်နှာ မရှု မလှ ပျက်ခဲ့ရတယ်
brb နဲ့ ကော ကို google နဲ့ ကော mmso နဲ့ ကော ။
သေချာနေတာ က တော့ သေချာနေလို့ ကျနော် လည်း သွားငြင်းမလို့ စကားလုံးရှာနေတုန်းပဲ ။
ဟက်ကင်းကိုလေ့လာတာ ကလေ့လာပါ ။ ဒါပေမယ့် deface မလုပ်နိုင်ပဲ သွားလုပ်စေချင်ဘူး ။ အားလုံးကိုယ့်ထက်ကိုယ် လူစွမ်း ကောင်းတွေကြီးပါပဲ ။
နောက်ဟက်တယ်ဆို ပြီး ဟိုပြင်ဒီပြင်ကြီး က ညာတာနဲ့ ပိုတူသွားတယ် ။ chat log တွေ ကိုလည်း ပေးထားတော့ ပိုဆိုးတယ် ။
ခုတော့ အရှက်လည်းကွဲတယ် ။
ခုတော့ ကျနော် ပဲ Mmso ကိုသွားတောင်းပန်ပြီး mmitresource နဲ့ သူ့ရဲ့ မောဒ် ကိစ်စ ဖျက်ပေးပါဆိုတာသွားပြောရမဲ့ပုံပဲ ။
နောက် gmail အကောင့်ပြန်ယူပေးမယ်ဆိုတဲ့ thread ကိုပါ ကျနော် အမှိူက်ပုံးထည်း ထည့်မိတော့မယ် ( စိတ်မကောင်းလို့
mmso ရဲ့ thread ထည်း အဲ့မောဒ်ရဲ့ profile ကိုပါ ထည့်ပြီး ပြထားလို့ ကို googl3 ကို ကျနော် personal တောင်းပန်းထားရတယ် ။
ကျနော် ပြောသင့်တာတော့ ပြောပြီးပြီ ။ ကျနော်ရေးတာနည်းနည်းရိုင်းနေတယ်လို့ ထင်ရင် ကို skyo နဲ့ /-tt@Ck3r ကြိုက်သလို အပြစ်ပေးလို့ ရပါတယ် ။
Last edited by z3r0c00l on 26th December 2009, 7:42 am; edited 1 time in total (Reason for editing : Link ပြင်လိုက်ပါတယ်အစ်ကို)
2 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 7:45 am
ကျွန်တော်တစ်ခုလောက် ပြောဦးမယ်။ ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ရတော့ ကျွန်တော်လဲ တော်တော်အံ့သြပါတယ်။
ကျွန်တော်အရင်ကသုံးတဲ့အကောင့် [You must be registered and logged in to see this link.] ကို Password သူများချိန်းသွားလို့
ကျွန်တော်ပြန်ယူပေးဖို့ပြောဖူးတယ်။ သူပြန်ယူပေးတယ်။ ရတယ်အစ်ကို။ အဲဒါကကော ဘယ်လိုမျိုးများလဲ?။
နားလည်တော့ဘူးဗျာ။ နည်းနည်းရှင်းပြပါလား ကိုနေဇော်။
3 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 8:41 am
ကို ဇီးရိုး အကောင့်ကို Recover ပြန်လုပ်သွားတာပါဗျ။
ကို ဘိတ်သားဗျာ ကျနော် သတိပေးတဲ့ကြားက လုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
ကျနော်လည်း ရှက်လွန်းလို့ ဒီဖိုရမ်က ထွက်ပလိုက်ချင်စိတ်ပါပေါက်တယ်။
4 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 9:54 am
z3r0c00l wrote: ကိုနေဇော်
ခိုးခံထိတဲ့ အကောင်းတခု ကိုပြန်ယူတယ်ဆိုတာ သိပ်မခက်ပါ ဘူး ။
ဒါပေမယ့် ဟက်တယ်ဆိုတာ ကတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ကို zero ရဲ့
5 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 2:06 pm
ခိုးခံရတဲ့မေးလ်ဆိုရင် ပြန်ယူရတာလွယ်ပါတယ်။ ဒီဖိုရမ်မှာ အဲဒိအကြောင်းဖတ်ဖူးသလိုပဲ။ form ဖြည့်ပီးပြောင်းတာလေ။ အဲ တစ်ခါ အခိုးခံရရင်တော့ အဲဒီအကောင့်ကို ပြန်ယူပီး delete လုပ်လိုက်ပါတော့။ delete လုပ်ပီးရင်တော့ ပြန်ဆယ်ဖို့ဆိုရင် ပိုပီးတိကျတဲ့အချက်အလက်တွေ လိုပါတယ်။ delete မလုပ်ဖူးဆိုရင် အရင်ခိုးသွားသူက pw အဟောင်းလေး၊ mail contact3ခုလောက်၊ စလုပ်တဲ့ရက်စွဲလေး သိရင်ကိုပဲ ပြန်ယူလို့ရနေပါတယ်။...
6 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 3:05 pm
အစက ဟိုတော့ပစ်ကိုတွေ့တုန်းက အဲဒီအကို့ကို ISP က admin တစ်ယောက်ထင်တယ်လို့ တွေးမိတာ။
isp က admin ဆိုရင်တော့ လုပ်လို့ရမှာပါ။
7 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 6:26 pm
ငါတောင် လေပါတယ်ဆို။ ဖိုရမ်ကို ဖျက်ပြီးတော့ အဆုံးသတ်ပလိုက်ချင်စိတ်ကို ပေါက်တာ။
Gtalk မှာ ပြောမယ်ဆိုရင် နက်ဖြန် ညနေ ၄နာရီလောက်တော့ လာခဲ့ဦး။
ဒီနေ့တော့ သောင်းစား ကွန်နက်ရှင်က တက်ကိုမလာလို့။
8 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 6:35 pm
ဖိုရမ်က ကွန်ပြူတာဂျာနယ်မှာ ပါတယ်လား???
တကယ်ဆိုရင်တော့ လေနေတဲ့စိတ် တစ်ဝက်လောက်လျော့သွားဘီ။
အေး မင်းပြောသလိုဘဲ ဖိုရမ်သေးသေးလေးကော ၊ ပြီးတော့ ငါ့ကို ကစ်ထားတာလေးတွေပါ သိပ်တော့ မကြိုက်ဘူး။ ခင်နေလို့ ထားလိုက်တာ။
ဒီနေ့ကစပြီး ငါကြိုးစားမှဖြစ်မယ်။ ပြီးတော့ အားလုံး အံ့သြသင့်မယ့်ကိစ္စတစ်ခုခုကို ရအောင်လုပ်မှဖြစ်မယ်။
ပြီးရင် MITR နာမည်တပ်မယ်။ ငါ့ရဲ့ ဟို Project ကို မြန်မြန်လုပ်ရမယ်။ လူထပ်ရှာရဦးမယ်။ အခုက ငါတစ်ယောက်ထဲရယ်။
9 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 7:26 pm
ကျွန်တော်က mmitresource က email ဖောက်နိုင်တဲ့ Hacker ရှိတယ်ဆိုတာသိစေချင်လို့ပါ
ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်ပါတယ် အင်တာနက်အချိန်ပြည့်သာသုံးရမယ်ဆိုရင် တစ်ကယ်ရပါတယ်
ကျွန်တော်မှာက နေ့ဆိုရင် နံနက် 6နာရီကနေပြီး ည 6နာရီလောက်အထိအလုပ်ကိုပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ရတာပါ
10 Re: စိတ်လေလို့ on 26th December 2009, 10:15 pm
သရဲ wrote: အစက ဟိုတော့ပစ်ကိုတွေ့တုန်းက အဲဒီအကို့ကို ISP က admin တစ်ယောက်ထင်တယ်လို့ တွေးမိတာ။
ကိုသရဲ isp က ADMIN ဖြစ်အုန်း မလွယ်ဘူး ။ နော်
ကိုမြိတ်သားလေရေ hacking , hacker , gtalk hacking ဆိုတာကိုရောနေပြီ ။
gtalk hack တာကို hacker လို့ မခေါ်ဘူး ။
ကျနော် ဘွဲ့ရလို့ လက်ရှိ ပညာအရည်အချင်း နဲ့ တောင် google မှာအလုပ်မရနိုင်သေးဘူး ။ google မှာကျနော်တို့ ထက်တော်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲ လေ ။
hack တာ မ hack တာကို လည်းကျနော်တို့ အဓိက ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး ။
အဓိကက fake hacking page ကြီးသွားတင်တော့ အကိုရဲ့ chat log တွေကတဆင့် ဖိုရမ်ကိုစော်ကားသွားတာပဲ ။
ပထမ ကျနော်လည်း ကို goog နဲ့ mmso ကိုတော်တော် စိတ်ဆိုးမသိသွားတယ် ။
ဒါပေမယ့် အကိုက သာ ကျနော်တို့ တားတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒါကြိးကို မလုပ်ခဲ့ရင်ဒါတွေဆိုတာလည်း မရှိလာနိုင်ဘူးလေ ။
အပြစ်ပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူး ။ကို skyo နဲ့ zero တို့ သွားဖြေရှင်ပြီးသွားပြီ ။
gmail ဟက်ကင်းကိုမလေ့လာခင် gmail ဘယ်လို secuirty နဲ့ တည်ဆောက်ထားတယ်ဆို အရင်လေ့လာသင့်တယ် ။
နောက်ပိုင်း 2010 ဆို google ရဲ့ security အင်အား ပိုတိုးလာတော့မယ် ။
@attacker ကျနော်တို့ ဖိုရမ် လေးတဲ့ page လေးတင်ပေးပါ အုန်း ။ scan ပဲဖြစ်ဖြစ် ။ စိတ်ညစ်စရာတွေ အများကြီးထည်းက အဲ့ဒါတွေ့တော့ ခွန်အားရှိတာ ပေါ့ညီရာ ။
11 Re: စိတ်လေလို့ on 27th December 2009, 4:02 am
အခုကိစ္စက တော့ MMSO ကိုနည်းနည်းလေး သွားထိခိုက်သလို ဖြစ်သွားတော့ သူတို့လည်း ခံပြင်းကြသလိုဖြစ်သွားကြတာပါ။
ကိုမင်းကိုအနေနဲ့လည်း ဘာပဲပြောပြော ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ ယူလို့ရခဲ့တဲ့ မေးလ်တွေလည်းရှိခဲ့ရင်ရှိခဲ့မှာပေါ့ ..ဲကိုမင်းကိုရဲ့
စေတနာကိုလည်း လေးစားပါတယ်.. ကိုယ့်ဖိုရမ်ကို လူတွေပိုသိစေချင်လို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပါ။
ပြီးတော့ ပထမ ကိုနေဇော်ပြောခဲ့သလိုပဲ အကိုဖွင့်ထားတဲ့ topic ကလေးကို အမှိုက်ပုံးထဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖျက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ပိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် ..
တစ်ခုခုတော့ လုပ်စေချင်ပါတယ် .. အခု ဟာက MMSO က သူတို့ဆီမှာ အဲဒီ့ Thread ကြီးကိုဖွင့်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ဖိုရမ်ကို
ကောင်းကောင်း ပြောနေတဲ့ပုံကြီးရယ် ... ပြီးတော့ ဖိုရမ်ထဲကိုပါ လာပြီးတော့ ပြောသွားသေးတယ်..
ဖြစ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ကိုနေဇော်ပြောတာကိုပဲ ပြန်ညွှန်းရမှာပဲ ..
ခုတော့ ကျနော် ပဲ Mmso ကိုသွားတောင်းပန်ပြီး mmitresource နဲ့ သူ့ရဲ့ မောဒ် ကိစ်စ ဖျက်ပေးပါဆိုတာသွားပြောရမဲ့ပုံပဲ
အဲဒီ့ကိစ္စ က တော့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ ကိုယ့်အနေနဲ့ တော်တော့်ကို အောက်ကျို့ခံရမဲ့အဖြစ်မျိုးကြီး။။ ဘယ်လိုပြောရမယ်တောင်သိတော့ဝူး
ဖြစ်စေချင်တာကတော့ သူတို့ဖိုရမ်နဲ့ ကိုယ့်ဖိုရမ် ညှိညှိနှိုင်းနှိုင်းနဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေစေချင်တာပါ။
စကားပြောတွေများမှားခဲ့တာရှိရင်ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ....ဆက်ပြောဖို့ကို ဘယ်လိုတွေရယ်ပြောရမယ်မှန်းမသိလို့ ဒီမှာတင်ရပ်လိုက်ပါတယ်။
Attacker ရေ .. ဖိုရမ်ကြေငြာထားတာကလေးကို Capture ကလေးဖမ်းပြီးတော့ တင်ပေးပါဦးနော်..
12 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 12:10 am
ကဲပါညီတို့ ရာဖြစ်ပြီမှတော့ ပြောနေလဲအပိုပဲ ။ ကိုကမှာနေမှတော့တောင်းပန်ရတော့ မှာပေါ့ ။
တပည့် မကောင်း ဆရာခေါင်း တဲ့.... သားသမီးမကောင်းမိဘခေါင်းတဲ့ ..... အဲဒီလိုပဲမှတ်လိုက်ပါညီတို့ ရာ ။ ဒီအမည်းစက်ကို ဖြောက်ဖို့ အားလုံးဒီထက်ပိုကြိုးစားပေးကြပါလို တောင်းပန်ပါတယ် ။ အားလုံးပဲဒီထက်ပိုကြိုးစားပေးကြပါ ။
13 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 9:40 am
ကို Хакер-истребитель ကတော့ထပ်လုပ်ပြန်ပြီဗျာ။ အစ်ကိုရေ.......တော်ပါတော့ဗျာ။ အစ်ကိုလုပ်ချင်ရင်လဲ အစ်ကိုလုပ်ထားတဲ့ဟာကို သူ့မေးလ်ထဲပဲ ပို့လိုက်ပါလားအစ်ကိုရာ။ အစ်ကိုက ဖိုရမ်ပေါ်တင်လိုက်တော့ အခုတစ်ခါ အစ်ကိုတကယ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ရင်တောင်မှ အရင်လူတွေက ပြီးခဲ့တဲ့ကိစ္စပေါ်နင်းပြီး အစ်ကို့ကိုမညှာမတာ ပြောသွားကြတယ်....တွေ့လားအစ်ကို။ အစ်ကိုတင်မကဘူး။ ဖိုရမ်ပါ အပြောခံရတယ်။ ထပ်မလုပ်ပါနဲ့တော့အစ်ကိုရာ။
14 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 10:01 am
ကျနော်လည်းပြောမလို့ပဲ ။ သူတို့ မပြောနဲ့ ကျနော်လည်း မယုံဘူး အဲ့ဒါကို ။
15 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 10:14 am
ဘာတွေပြောရမှန်းကို မသိတော့ ပါဘူး။ ညီလေးတို့တစ်ခုခုတော့ ဆုံးဖြတ်ကြပါ။ မဟုတ်ရင်ပိုဆိုးလာလိမ်မယ်... mmitresource and mmso တို့ ကြားမှာ။
16 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 10:17 am
$ƴǩǾ & Attacker & alt.332 တို့ တစ်ခုခုဆုံးဖြတ်ကြပါဦး။ ကျွန်တော်တို့က Jmod ဖြစ်နေတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ $ƴǩǾ & Attacker & alt.332 တို့ လုပ်မှရမှာ။ ပြီးတော့ သူက Global Moderator လေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့
Senior။ လုပ်ကြပါဦးဗျာ။ ကြာရင်မကောင်းဘူး။ တော်တော်မကောင်းတာပါ။
17 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 5:12 pm
ကျေပါစေ ဒီဘ၀အတွက်တော့ဒီတင်ပဲ့ကျေ သီချင်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်
တော်သေးတယ် attacker အပြောကောင်းလို့
18 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 5:18 pm
[You must be registered and logged in to see this link.] ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ MMITRESOURCE က Hacking Forum လည်းမဟုတ်ပါဘူး...သူများ Forum တွေကိုလိုက်ပြိုင်နေတဲ့ Forum တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါဘူး... မြန်မာအချင်း၂ ကိုယ်သိထားတာတွေ Share မယ်..ကိုယ်မသိတာတွေ Study လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ Aim နဲ့ပဲ လုပ်ထားတာပါ....နောက်ပြီး MMITRESOURCE မှာ Email ကိုဖောက်နိုင်မယ့်သူ ရှိတာမရှိတာထက် ၀င်လာမယ့် Member တွေကို Knowledge တွေအများကြီးပြန်ပေးနိုင်တဲ့ Forum တစ်ခုပဲဖြစ်စေချင်တယ်ဗျာ....ကျေးဇူးပြုပြီးဒီကိစ္စတွေကို ဒီမှာပဲရပ်ပေးပါ....နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ Forum နာမည်လဲ ဒီ့ ထက်ထပ်မပျက်ပါရစေနဲ့ဗျာ....မေတ္တာရပ်ခံတာပါ...ဆရာလုပ်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး...အမှားပါရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ...
19 Re: စိတ်လေလို့ on 1st January 2010, 5:22 pm
20 Re: စိတ်လေလို့ on 3rd January 2010, 6:40 pm
ဘယ်သူတွေ ရေးရေး မရေးရေး။ ငါရေးတယ်။
အသားလွတ် စော်ကားတာတွေ ဒီ့ထက်ပိုပြီးသည်းမခံနိုင်တော့ဘူး။ ဖြစ်လာသဗျှပြဿနာကိုလည်း ငါတစ်ယောက်ထဲ ဖြေရှင်းပေးမယ်။ ဘယ်သူမှဝင်မပါနဲ့။
ဒီဘက် ဖိုရမ်ထိရောက်လာလည်း ငါဖြေရှင်းမယ်။
ပြီးတော့ ကို မြိတ်သား ကိုလည်း နောက်တစ်ကြိမ် တောင်းဆိုပါတယ်။
ဖိုရမ် နဲ့ အစ်ကို့ဘက်က နေပေးတဲ့သူတွေ မျက်နှာထောက်ပြီးတော့ သိက္ခာကျမယ့် ကိစ္စလေးတွေ ထပ်မဖန်တီးပါနဲ့။
21 Re: စိတ်လေလို့ on 3rd January 2010, 6:43 pm
Online ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ ငါ ၀င်မပါဘူး..အေး အပြင်ဘက်မှာပါ ၀င်ရမယ်ဆိုလို့ကတော့ တစ်ချက်ပဲ PM ပို့လိုက်
22 Re: စိတ်လေလို့ on 3rd January 2010, 6:47 pm
အစ်ကိုပဲ့တောင်းပန်ပါတယ်ကွာ ဆက်ပြီးမကြည့်နဲ့တော့ ဒီ post ကို အစ်ကိုတောင်မကြည့်တော့ဘူး
23 Re: စိတ်လေလို့ on 4th January 2010, 5:59 am
ကိုမြိတ်သား က သွားသွားစွ တာကို ။ skyo လည်းဒေါသမထွက်ပါနဲ့တော့ ။ အကြိုးမရှီဘူး ။
ကိုမြိတ်သား တကယ်အစွမ်းရှိရင် mmso ကြီးကိုသွား hack ပြီး admin pw database တွေ swap inject လုပ်ခဲ့လိုက်ပါ။ သွားမကြည့် ဘူးဆိုတာ ကြီးကိုမလိုချင်ဘူး ။ ယောင်္ကျားဆိုတာ ကိုယ်လုပ်ရဲ ရင် ကိုယ် ခံရဲရတယ် ။ ကိုယ်လုပ်တာကို တခြားလူတွေ က သွားပြောရတာ ။ ငါတို့ ဖိုရမ်မှန်တယ် ဗျ ဆိုတဲ့ မျက်နှာ ငယ်လေးတွေ သွားရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်သင့်လား ။
ကိုမြိတ်သား အနေနဲ့ mmitresource နဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် အဲ့ဖိုရမ်မှာ သွားရေးပေးစေချင်တယ် ။
ကိုမြိတ်သားပိုစ်တခု တင်လိုက်တာ ကျနော်တို့ အက်မင် မောဒ်တွေ တန်းစီး ပြီးသွားတောင်ပန်ရတိုင်းကတော့ မဖြစ်စေချင်ဘူး ။
ကိုယ်မြိတ်သားကိုယ်တိုင် mmso ကအက်မင်တွေထက် hacking skill သာတယ်လို့ထင်ထားလို့သွားလုပ်တာလေ ။
နောက်ဖြေရှင်းချက်မှာ mmitresource နာမည် ကိုပါထိခိုက်လာတဲ့ ကိစ်စ မပါ အောင် အထူးဂရုစိုက်ခဲ့ပေးပါ ။
ရန်ဖြစ်နေလို့ ကတော့ ဘယ်သူမှ ဘယ်သူ မသာ နိုင်ပါဘူး ။
နောက် security team ကို ကူညီပေးနေတာ mmso က root adminဖြစ်တဲ့ ကို sp1der နော် ။
မျက်နာတွေ ပိုပျက်လာလိမ့်မယ် ။ ပြောစရာကြီးတွေပါဖြစ်လာလိမ့်မယ် ။
24 Re: စိတ်လေလို့ on 4th January 2010, 6:23 am
သွားဖတ်ပြီးပြီ ။ ပိုဒေါသထွက်လာတယ် ။ tzmt နဲ့ မီကိုဆိုတဲ့ ကောင် က ဘာမှ အသုံးကျတဲ့ကောင်တွေ မဟုတ်ဘူး ။ ပွဲလန့်တုန်းဖျာ ၀င်ခင်းကြတာ ။
25 Re: စိတ်လေလို့ on 4th January 2010, 3:32 pm
nay@zaw wrote: ကိုမြိတ်သား က သွားသွားစွ တာကို ။ skyo လည်းဒေါသမထွက်ပါနဲ့တော့ ။ အကြိုးမရှီဘူး ။
ကျနော်လည်း ဒေါသကို ထိန်းတာဘဲဗျ။ ထိန်းတာမှ တော်တော်ကြီးကို ထိန်းရတာ။
ဟိုဘက်မှာက ကို ဂူး လည်းရှိသေးတယ်လေ။ ကို sp1der နဲ့ကတော့ သိပ်မခင်ပေမယ့် သူ့ကို လည်း လေးတော့လေးစားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သူတို့ဘက်က တအားလွန်လာလို့ ကျနော်လည်း မထူးဇာတ်ခင်းလိုက်တာ။
အပြင်မှာသာဆိုလို့ကတော့ အဲကောင်တွေ အကုန်အသေဘဲ။
Security Team အလုပ်မဖြစ်လဲဗျာ အစ်ကိုကူညီပေးပေါ့။ အစ်ကိုလည်း ဦးဆောင်နိုင်မှာဘဲကို။
သူများကို အားမကိုးတော့ ပိုတောင်ကောင်းသေးတာဘဲမှတ်လား။
26 Re: စိတ်လေလို့ on 4th January 2010, 5:02 pm
ကျွန်တော် လက်အပူလောင်းထားလို့စာသိပ်ရိုက်လို့ မရဘူးဗျာ။ but mmso မှာ ဖြစ်နေတာတွေ ဖတ်ရတာ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ ညီလေး [You must be registered and logged in to see this link.]
ဘာမှအားမယ်ပါ နဲ့ငါ့ ညီသိချင်တာတွေကို ကိုယ်တိုင်ပဲစာ ဖတ်ပြီးလေ
့လာပါကွာ။ ရေမပြည့် တဲ့ အိုးတွေ ထဲ မှာတော့ရေသွားမရှာပါနဲ့ 
ပညာရှာချင်ရင် ပြည့် တဲအိုးထဲကရေကိုပဲခပ်ပါကွာ ။ ဗမာစကားပုံလေးတစ်ခုရှိ
တယ်ညီရ " မသိရင်မေးတဲ့"
မသိလို့ မေးပါတယ်ဆိုကာမှ ...." ကြက်တူရွှေးတော်တော် မယ်ဘော်ကဲကဲ " လို လူစားတွေ
ပညာရှိယောင်ဆောင်နေတဲ့" စပါးနှံ " လို လူစားတွေ ( ဆန်ပါတဲ့ စပါးက ကွေးနေတာပဲ...
ဘာမှ မရှိတဲ့ စပါးနှံတွေက ထောင်နေတာပဲ ) မရုံဘူးလား မရုံရင်
မှာကြည့် ပါ။ ( အောင်တဲ့ စပါးနှံလေးတွေက စကားကို ပညာရှိတို့ပုံစံ ပြောသွားတယ်
eg: ညီလေး brb ပြောသွားပုံ ။ မအောင်တဲ့ စပါးနှံ ထောင်တဲ့လူတွေကို တော့
မရေးပေးတော့ ပါဘူး စာတွေကို သေချာဖတ်တဲ့လူတိုင်း သိကြမှာပါ။ အသက်ကြီးကြ
တဲ့ သူတွေကလဲ တက်သစ်လေးတွေကို ထိန်းသိမ်းပေးမယ်မရှိဘူး ။ သူတို့ ကပါဆိုးနေကြတာ
တော့ ရင်လေးပါတယ်ဗျာ မြန်မာ IT လောကကြီးအတွက်။ များသောအားဖြင့် Forum
မှာ ကျွန်တော်ထက် ငယ်ပြီးကျွန်တော်ထက် အစစ အရာရာ ပညာပြည့် ဝကြတဲ
အကို မှာချင်တာ က သူများစကားကို လိုက်ပြီး မယုံပါနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
ယုံသင့် လား? မယုံသင့် လား? ဆိုတာကို......
ညီလေး [You must be registered and logged in to see this link.] ရေ နောက်ဆို private ပဲပို့ ပြီးမေးညီရေ့ ........
ဒီလို လူမျိူးတွေကြောင့် 
နေရာလေးတစ်ကွက် ရ ရန်လို့ သူကြံ
ဆင်လို ကြံ တဲ့ မ A...............:
မင်းတို့ လို ပဲ ငါ ကပ်ပြီး ဆဲတယ် ။
မင်းဘယ်လို သဘောပေါက်တုံး ။
( မင်းတို့လဲစကားကို ကပ်ပြောပြီ မင်းတို့ ပြောချင်တဲ့စကားရောက်အောင်
ပြော မှ တော့ငါ လဲ ကပ်ပြီး ဆဲ ကြည့် မယ် မင်းတို့ ဘယ်လို
ရေးသားသူ ( Ogre )
လှပတဲ့ ကဗျာလေး ရဲ့ ဆိုလိုချက်လေးကို သဘောကျတယ်ဗျာ ။ တကယ်လို ချင်မှယူကြနော်။
လူအထင်ကြီးအောင်မယူရဘူး။ ကြားလား ညီလေး [You must be registered and logged in to see this link.] ......
တို့စာ တို့စကား မြဲထွန်းကားဖို့
တို့ပြည် တို့ရွာ တို့သာသနာနှင့်
မင်းတို့ငါတို့ တာဝန်ရှိတယ် သူငယ်ချင်း
Last edited by ogre on 5th January 2010, 4:20 pm; edited 1 time in total
27 Re: စိတ်လေလို့ on 4th January 2010, 8:17 pm
ကျနော် စိတ်ထင် ကျနော်တို့ ဘက်က တာဝန်ကျေပြီ ။
ဒီထက်ပိုလွန်ရင်တော့ အကြမ်းနည်းပဲသုံးတော့မယ် ။
mmitresource လည်းနဂါးဆို တာအမောက်လေးလောက်တော့ ထောင်ပြအုန်းမယ် ။
ps: ကျနော် gtalk pw ခိုးခံထိသွားတယ် ။ ကံ ကောင်းတာက chat log တွေတော်တော် များများ ကျနော်ဖြတ်ထားလို့ ။ ခိုးတဲ့လူနာမည်တော့မပြောတော့ပါဘူး ။ ဒါပေမယ့် ကျနော် ပြန်ယူတာ အချိန်မှီရခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါအပြင် သူတို့ server ftp account ပါကျနော်လက်ထည်းရောက်လာတယ်
28 Re: စိတ်လေလို့ on 5th January 2010, 3:37 pm
ဟာ အဲဒီလိုတောင် ညစ်ပတ်တာပဲလား။
29 Re: စိတ်လေလို့ on 6th January 2010, 8:48 pm
အော် ဒုက္ခ ဒုက္ခ။
ငါတို့ရဲ့ ဘ၀ကလည်း ကလေး ဆိုတာနဲ့ ဘယ်သူမှ မလေးစားကြတော့ပါလား။
ဒီကြားထဲ အနိုင်ယူ ညစ်ပတ် လှည့်စား ယုတ်မာ ကောက်ကျစ် လိမ်ညာ တဲ့ ကောင်မျိုးတွေနဲ့လည်း တိုးရသေးတယ်။
30 Re: စိတ်လေလို့